About - Beihua Polymer ny Vondrona Fanampiny Co., Ltd.
Ny Alibaba International Site
Nandoro ny fisorohana masterbatch
Active mpandraharaha masterbatch
Vulcanizing mpandraharaha masterbatch
Hamandoana absorbent masterbatch
Silane efa voavitrana mpandraharaha masterbatch
Piraofilin'ny orinasa Kolontsaina Honor fitaovana fikambanana Partner
Jiaxing Beihua Polymer ny Vondrona Fanampiny Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2010 miaraka amin'ny voasoratra anarana renivohitry ny 73,155 tapitrisa yuan. Izany dia avo-teknolojia orinasa manokana amin'ny famokarana isan-karazany mialoha Niparitaka masterbatch. Ny orinasa no misy ao amin'ny Jiashan Zheshang Siansa sy ny Teknolojia Park. Izany dia miorina ao afovoan-tanànan'i Shanghai, sy Suzhou Hangzhou. Tsy tia mety fitaterana, ambony tontolo iainana sy ny fanohanana feno trano.
Ny orinasa miara-miasa amin'ny Oniversiten'i Beijing Chemical Teknolojia mba hampitombo tsara mialoha-Niparitaka masterbatch fingotra. Tsy specializes amin'ny famahana ny olana ny fikarakarana sy ny pielezana any fingotra vokatra, fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fandidiana optimizing ny dingana famokarana. Manana ny toetra mampiavaka ny hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, fampihenana ny tahan'ny vokatra kilema sy angovo fahavaratra. Teknolojia mampiova ny endriny ho vokatra.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa ny vokatra isan-taona mifanaraka amin'ny Output ny 6.000 taonina efa fomba ofisialy nataony tao famokarana, ka dia antenaina mba hiara-hiasa amin'ny namana ao an-trano sy any ivelany hanangana hoavy tsara kokoa.
Adiresy: ampiana hoe: No. 36 Zhendong Road, Weitang Street, Jiashan County, Zhejiang Province